Wakiilka Soomaaliya: ICJ ha Diiddo diidmada Kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wakiilka Soomaaliya: ICJ ha Diiddo diidmada Kenya
A warsame 24 September 2016 24 September 2016
Shalay oo Jimco ah waxaa la soo gebagebeeyay dhegeysiga Diidmada Hordhaca ah ee Kenya ay uga soo horjeeddu furitaanka Dacwadda Kenya ka dhanka ah ee ay Soomaaliya u soo gudbisay Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ee magaaladan Hague.
Soomaaliya ayaa shalay oo Jimco ah bixisay jawaabteeda kama dambeysta ah. Waxaa hadlay saddex qareen oo hadalladoodu ay is kaabayeen iyo Dr. Mona Sharmaan oo soo gunaanadday codsiga Soomaaliya ay u soo jeedineyso Maxkamadda.
Waxaa hadalka furay Prof. Pellet asaga oo ka jawaabaya Qareennada Kenya sida ay u fasireen MoU caanka noqotay ee 2009 ay kala saxiixdeen Soomaaliya iyo Kenya.
Prof. Pellet wuxuu ku tilmaamay in qareennada Kenya ay MoU 2009 ka yeersiinayaan wax aan ku qorneyn. Waana xadgudub ay Maxkamadda ku sameyneyaan, ayuu yiri, in ay isku dayaan in qoraal hor yaalla uga sheegaan wax aan ku qornayn.
Waxaa xigay Paul Reichler oo qareennada Kenya hadalkooda marka la qoray sadarrada inta u dhexeysa aad u akhriyay. Wuxuu hadallada Qareennada Kenya ka baadi goobay, ka soo saaray, Maxkamaddana la wadaagay waxyaabo iska hor imaanaya. Dhowr tusaale ayuu soo qaatay.
Waxaa kale oo uu soo sheegay hadalladii uu isagu Maxkamadda ka jeediyay wareeggii koowaad in ay Qareennada Kenya hadda aqbaleen ama ugu yaraan aanay wax ka hor imaaneysa aanay bixin sidaa darteedna looga talo geli karo in ay sidooda u aqbaleen.
Wuxuu taxay toban qodob oo qaanuuniyan muhiim ah oo uu sheegay in uu ku jeediyay jawaabtiisii wareegga koowaad. Taas oo Kenya ay fursad u heysatay in ay riddiso markii ay sameyneysay soo jeedinteedii wareegga labaad. Mid ka mid ah tobankaa qodob oo ay diideen ma jiro. Keliya qodob kooban oo ay muran geliyeen iyadana uu ka jawaabay oo qaanuuniyan fasiraaddiisu ay dheer tahay ayaa jiray.
Qodobbada wuxuu ka soo xigtay emaillo, dokumentiyo, fasiraado iyo jawaabo ay xilliyo kala duwan bixiyeen Norway oo qortay MoU-da, Kenya iyo Soomaaliya. Dhammaantood waxay tilmaamayeen in MoU 2009 ay ku saabsan tahay keliya in labada dal aan midna waxba ka qaban in kan kale uu Guddiga Qarammada Midoobay ee CLCS u gudbiyo soohdintiisa qalfoofta qaaradeedka. Tusaaleyaashaas oo dhan meelna ugama xusna ayuu yiri in ay MoU 2009 ay tahay in iyada loo raaco habka xallinta khilaafka soohdin badeedda.
Wadahadallada dhex maray labada dal oo Qareennada Kenya ay ku tilmaameen in ay ahaayeen heer farsamo oo billow ah, wuxuu Paul Reichler sheegay in aanay xaqiiqadu sidaa ahayn. Wuxuu sheegay in labada Wasiir ee Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya iyo Kenya ay ka qeyb galeen isla markaana ay aragtiyo ka dhiibteen. Dabcan waxaa uu Wasiir waliba u warbixinayay Hoggaamiyaha ugu sarreeya Dowladdiisa.
Professor Lowe oo Kenya u doodayay, ayaa hadda ka hor Maxkamadda wuxuu u sheegay in ay Soomaaliya dacwadda ku degdegtay laakiin meel la isugu keeni karay mowqifyada kala duwan ee labada dal. Wuxuuna sheegay in haddii ay Soomaaliya la noqotay in aan arrinkaan xal laga gaari karin aanay sidaa ku wargelin Kenya.
Reichler wuxuu yiri Kenya fasiraad kama bixin sababta ay u rumeysan tahay in xal la gaari karay. Waxa keliya oo Prof Lowe uu soo xigtay, ayuu yiri, dokumenti Dowladda Kenya ay hay’adaheedu isu direen 8 August 2014. Laakiin waxaa xusuus mudan in xilligaasi ahaa markii la diyaarinayay kulan la filayay in uu dhaco oo xal rajo la qabay.
Laakiin Kenya waxay ka baaqsatay in ay tagto Muqdisho oo uu ka dhici lahaa shirka xalka lagu goobi lahaa, iyada oo aan weliba fasiraad ka bixin.
Qaabka ay Kenya u dhaqantay iyada oo laga shaqeynayo arrin sidaa muhiim u ah oo ku saabsan heshiis soohdimeed, waxay muujineysaa in aanay ka tarjumeyn fasiraaddeeda Paragraph 6 ee MoU 2009 oo ay ku tilmaamayaan in uu yahay hannaanka loo raacayo xallinta khilaafka soohdinta.
Xataa inta dooddan Maxkamaddu ay socotay fasiraadaha ay Kenya ka bixisay paragraph 6 ee MoU 2009 dhowr jeer ayuu is beddelay, iyaga oo marba fasiraaddoodii ugu dambeysay ka sameynaya dib-u-gurasho xeel dood.
Waxaa xigay Prof Sands oo ku tilmaamay in xataa haddii Kenya loo raaco dooddeeda ah in MoU 2009 ay Soomaaliya khasab uga dhigeyso in ay wadahadal la gasho Kenya, ay Soomaaliya shuruuddaa fulisay.
Mona Sharmaan ayaa soo gunaanadday doodda Soomaaliya. Waxay kabahiisa gashatay oo ay qirtay hadalka uu yiri Garyaqaanka Kenya. Wuxuu ku tilmaamay ayay tiri in marka wadahadalka Kenya furmayo ay Soomaaliya markaa uun ay ka soo baxday sannado badan oo dagaal sokeeya, masiibooyin aadminnimo iyo falal argagixiso oo baahsan. Waa marka ay Kenya door bidday in ay wadahadal la furto Soomaaliya. Waa dhab ayay tiri. Weliba Soomaaliya waxay sida ay 2014 ahayd ka sii liidatay, ayay tiri, 2009 oo welibana ay Dowladdu ahayd mid cusub. Taas ayaana caddeyneysa in MoU 2009 aanay xammili karin miisaanka ay Kenya siineyso.
Maxay Soomaaliya u dooni kartay, ayay Maxkamadda weydiisay Mona, in ay lugaha la gasho xilli aan soohdinteeda la cayimin? Sharci aanay hor geyn karin si ay kheyraadka ka maqan u hesho, iyada oo aan ognahay in Soomaaliya ay aad ugu tiirsan tahay kaalmo shisheeye?
Mona waxaa kale oo ay sheegtay in markii ay Kenya ka baaqsatay in ay Muqdisho timaaddo si loo qabto shirkii uu codsaday Wasiirkeeda Arrimaha DIbadda ee uu Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya uu aqbalay, aanay jirin wax fasiraad ah oo ay bixisay. Mona waxay intaa ku dartay in Soomaaliya ay u soo jeedisay Kenya in ay labada wafdi ku kulmaan dalka Djibouti, laakiin Kenya aanay taa ka soo jawaabin.
Mona waxay xustay in Kenya ay Maxkamadda ka sheegtay in tan iyo 1979 ay ka talineysay badda hadda uu muranku ku jiro. Waxay ku tilmaantay Mona in aan hadalkaasi ahayn wax khuseeya ama wax ku soo kordhinaya dacwadda ku saabsan cidda leh badda.
Laakiin sheegashadaas Kenya in ilaa 1979 ay iyadu maamulaneysay badda waxay fasireysaa sababta uu wadahadalku u burburay taas oo ah in Kenya ay aamminsan tahay in badda lagu muransan yahay ay iyadu leedahay waxna aanay ka maqnayn.
Haddana hadalka Kenya isaga ayaa is burniya ayay tiri Mona. Waxay soo qaadatay Prof. Akhavan oo arbacadii sheegay in Ciidanka Badda ee Kenya uu isaga oo qeyb ka ah ciidammada Midowga Afrika uu ilaaliyo baddaas, howshaas oo uu Golaha Ammaanka ee Qarammada Midoobay u fasaxay.
Mona waxay tiri, haddiiba aan Kenya hadalkeeda run ka soo qaadno, inkasta oo Soomaaliya aanay sidaa qabin, sow ma ahan in ay badda ilaalineysay iyada oo ka tirsan ciidammada Midowga Afrika ee aanay ahayn bad ay iyadu leedahay?
Mar kale waxay xustay Mona sida ay Soomaaliya aad ugu qaddarineyso xiriirka qotada fog ee kala dhexeeya Kenya. Waxayna sheegty in Kenya walaaca amni ee ay qabto uu yahay mid Soomaaliya iyo adduunka oo dhami ay la wadaagaan.
Nafta ay Kenya u hurtay Soomaaliya, sidoo kale Uganda, Djibouti, Burundi iyo qaar kale ay u hureen Soomaaliya, ma ahan ayay tiri Mona, sabab Soomaaliya la isaga hortaagi karo xuquuqda qaanuunka caalamiga ah ay ku leedahay oo uu u oggolaanayo.
Mona waxay soo jeedisay codosigeeda ugu dambeeya.
Waxay Maxkamadda ICJ ka codsatay in ay diiddo, diidmada hordhaca ah ee Kenya oo ay gasho dacwadda Soomaaliya ay soo gudbisay ee ka dhanka ah Kenya.
W/Q: Yusuf Garaad Cumar
Multiple Evidences Indicating that Russian and Syrian Forces Deliberately Targeted the U.N. Aid Convoy in Aleppo
AU deploys technical electoral support team in Somalia